Shuruudaha gunnadaada ee barnaamijka
Marka aad ka qaybqaadaneysid barnaamij, aadna hesho taageerada dhaqdhaqaaqa, gunno horumarin- ama saldhigasho, waxaa muhiim ah inaad tusaale ahaan sii waddo shaqo raadinta, aadna bil kasta noo soo gudbiso warbixinta dhaqdhaqaaqa. Haddii kale waxaa lagu siin karaa digniin. Haddii ay taasi dhowr jeer dhacdo, waxaa laga yaabaa inaadan wax gunno ah helin maalin ama dhowr maalmood. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa dhammaan shuruudaha gunnadaada.
Si aanad khatar ugu gelin in aad noqotid gunno la'aan waxaad u baahantahay inaad ka adkaato shaqo raadintaada, aadna raacdo qorshaha iyo heshiisyada aad nala leedahay. Haddii aad taageero ka hesho mid ka mid ah qandaraaslayaasheenna waxaad xitaa u baahantahay inaad raacdo qorshaha iyo heshiisyada aad la leedahay gacanhayahaaga halkaas.
in aad si firfircoon shaqo u raadsatid haddii aynaan wax kale ku heshiin, tusaale ahaan shaqooyinka la xayaysiiyay iyo shaqooyinka ay xafiiska shaqada ama gacanhayahaagu kugula taliyeen, ama aad shaqabixiyayaal u gudbiso CV iyo in aad shaqo daneyneysid.
in aad raadsatid shaqooyinka ama waxbarashada aannu kaa dalbannay inaad codsato
in aad inta u dhaxaysa 1-da 14-ka bil walba noo soo gudbiso warbixinta dhaqdhaqaaqa halkaas oo aad buuxineysid dhammaan shaqooyinkii aad codsatay iyo waxyaabihii kale ee aad qabatay.
in aynu qorshe wada samayno
in aad ka qeyb qaadatid hawlaha barnaamijkaaga ku jira
in aad ka qayb qaadatid kulammada ama nala soo xiriirtid annaga iyo qandaraaslayaasheenna waqtiyada aad ballanta leedahay iyo in aad taleefanka ka jawaabtid marka aan ku heshiinno in aan ku soo wacno.
Si aadna u dheereyn shaqo la'aantaada, khatarna ugu gelin in aad gunno la’aan noqoto, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad oggolaato
waxbarashada aad heshid ee aannu kaa codsannay inaad dalbato
wareysiyada shaqo, aadna aad ugu dadaasho sidii aad ku heli lahayd in shaqo laguu soo bandhigo
hawlaha aannu annaga ama qandaraaslayaasheennu kuugu soo bandhigno barnaamijkaaga gudihiisa.
Waxaad u baahantahay inaad na soo ogeysiisid haddii aad xanuunsato ama aad daryeeleyso ilmo xanuunsan oo aanad awoodin inaad ka qayb qaadato barnaamijkaaga. Haddii aad fasax u baahantahay, waa in aad marka hore annaga naga heshaa oggolaasho.
Haddii aad xanuunsato
Haddii aad daryeeleyso ilmo xanuunsan
Maxaa dhacaya haddii aanan samayn karin, waxa ay tahay in aan sameeyo?
Xafiiska Shaqadu wuxuu hubinayaa inaad buuxisay shuruudaha gunnada ee barnaamijka, wuxuuna go'aan ka gaarayaa in lagu siiyo digniin ama inaad gunno la’aan noqotid hal maalin ama in ka badan, haddii aad si xun u maamusho shaqo raadintaada ama aad dheereysid shaqo la'aantaada.
Haddii aad taageero ka hesho qandaraaslayaasheenna, waxaa waajib ku ah in ay Xafiiska Shaqada la socodsiiyaan haddii aadan ka qaybgelin waxqabad ama kulan aad iyaga la lahayd ama haddii aad si kale oo qaldan aad u dhaqanto. Waa inay sidoo kale nagu soo wargeliyaan haddii aad si uun u dheereyneyso shaqo la'aantaada. Gacanhayahaagu wax qiil ah kuuma heli karyo, wax tixgelin ahna ma siin karayo sababahaaga ee waa inuu wax walba na soo ogeysiiyaa. Dabadeed waxaannu eegaynaa wixi dhacay.
Haddi annagu Xafiiska Shaqada ahaan, aannu baaritaan bilawno waxaannu kugula soo xiriireynaa warqad, si aad fursad ugu hesho inaad na siiso macluumaad dhameystir ah, ka hor inta aannaan gaarin go'aankeenna kama dambeysta ah.
Soo gudbi macluumaad dhameystir ah
Maxaa dhacaya haddii aan si xun u maamulo shaqo raadinteyda?
Marka ugu horreysa: waxaad heleysaa digniin.
Marka shanaad iyo mararka ka dambeeya: 45 maalin oo gunno la’aan ah. Haddii ay gunnadaadu ku saleysan tahay lacagta shaqola'aanta, waxaa hoos loo dhigayaa ilaa iyo 223 koroon maalintiiba wixi ka dambeeyay 45-kaas maalmood.
Maxaa dhacaya haddii aan dheereeyo shaqo la'aantayda?
Markii ugu horraysa: 5 maalin oo gunno la’aan ah.
Marka afaraad iyo mararka ka dambeeya: 45 maalin oo gunno la’aan ah. Haddii ay gunnadaadu ku saleysan tahay lacagta shaqola'aanta, waxaa hoos loo dhigayaa ilaa iyo 223 koroon maalintiiba wixi ka dambeeyay 45-kaas maalmood.
Maxaan samayn karaa haddii aanan ku qanacsaneyn go'aanka?
Haddii aad heshay go'aan kama dambeys ah oo aadna ku qanacsaneyn, waxaad codsan kartaa inaan dib u eegno go'aanka. Haddii ay sidaas tahay, buuxi foomka "Codsiga dib-u-eegista go'aanka digniinta ama xayiraadda" (Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion) oo noo soo dir.
Codso in dib u eegis lagu sameeyo go'aanka
Ma noqon karaa gunno la'aan haddii aan daaho ama aan goor hore ka tago hawsha wax qabadka?
Gacanayarahaagu mar walba wuu noo soo sheegayaa haddii aad daahdo ama aad baxdo iyadoon waqtigu dhamaannin, iyadoon taas loo eegayn sababta maqnaanshada. Waxaan eegeynaa sababta iyo muhiimadda ay maqnaanshadaadu u leedahay fursadahaaga aad ku gaari lahayd ujeeddada hawsha maalintaas. Waxaan sidoo kale eegeynaa inay taasi dhacday dhowr jeer iyo in kale. Haddii aan u aragno in aad dhaqan-xumo sameysay, waxaad heli kartaa digniin ama gunno la’aan ayaad noqon kartaa maalin ama maalmo badan.
Haddii aan u baahanahay inaan hawsheyda ka tago si aan dhakhtar u booqdo, yaan ogeysiinayaa?
Haddii aad fasax u baahantahay, waa in aad marka hore annaga naga heshaa oggolaasho. Tani xitaa wey khuseysaa maqnaansho gaaban, tusaale ahaan haddii aad ballan la yeelatay dhakhtar ama dhakhtarka ilkaha. Xafiiska Shaqada oo keliya ayaa fasax ku siin kara, maaha gacanhayahaaga u shaqeeya qandaraaslaha. Gacanhayahaaga xitaa u sheeg si uu u ogaado inaadan imanayn wakhtigaas.
Maxaa dhacaya haddii aanan shaqa-guri u soo gudbin gacanhayaheyga waqtigii loogu talagalay?
Haddii aadan shaqa-guri, waqtigeeda ugu soo gudbin, wuu nagu soo wargelinayaa gacanhayahaagu. Haddii aan u aragno inaad dhaqan-xumo sameysay, waxaa laga yaabaa inaad hesho digniin ama aad gunno la’aan noqotid maalin ama maalmo badan.
Waxaan taageero ka helaa mid ka mid qandaraaslayaasha Xafiiska Shaqada, ma u baahanahay inaan isla mar ahaantaas xiriir la lahaado Xafiiska Shaqada?
Xafiiska shaqada ayaa ka mas'uul ah qorshaha guud ee lagula yeelanayo iyo dabagalka sida ay wax kuugu socdaan. Waannu ku ballansan karnaa inta aad la joogto qandaraaslaha, waxaadna u baahantahay in aad kulanka ka soo qeybgasho.
Waa inaad sii waddaa inaad bil kasta noo soo gudbiso warbixinta dhaqdhaqaaqa. Tani xitaa wey ku khuseysaa haddii aad qandaraasle uga warbixiso shaqooyinka aad codsato.
Haddii aad xanuunsato ama aad u baahato inaad guriga joogtid si aad u daryeesho carruur bukta, waxaa muhiim ah inaad la xiriirto Xafiiska shaqada maalinta ugu horeysaba. Xitaa gacanhayahaaga wargeli.
Sidoo kale waa in aad la xiriirto Xafiiska shaqada haddi aad shaqo hesho ama aad waxbarasho billawdo oo aanad u baahneyn in aad ku sii jirto barnaamijkaaga.
Yaan la xiriiri karaa haddii aan su'aalo ka qabo gunnadayda barnaamijka?
Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan shuruudaha iyo waxa aad u baahantahay inaad samayso si aadan gunnadaada u lumin, waa inaad la xiriirtaa Xafiiska shaqada.
Ma heshay warqad sheegeysa in baaris lagu wado gunnadaada oo su'aalo ma qabtaa? Ama ma is weydiineysaa sababta aad u heshay go'aanka digniinta ama joojinta? La xiriir qeybta dib u eegista gunnooyinka ee xafiiska shaqada. Macluumaadka xiriirku waxay ku yaallaan warqadda.
Haddii su'aalahaagu khuseeyaan lacag-bixinta, heerka gunnada ama sida aad u buuxineyso foomka codsigaaga gunnada, waa inaad la xiriirtaa Qasnadda ceymiska.
Haddii aad ka qeybqaadanayso barnaamij (barta Qasnadda ceymiska)